ဆာမူရိုင်းဓါးချက်နဲ့လေခွုန်သံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဆာမူရိုင်းဓါးချက်နဲ့လေခွုန်သံ
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Jun 8, 2013 in Copy/Paste |9comments
ညကကျနော်၁၀တန်းအောင်စာရင်းကို moemyanmar.net မှာတင်မယ်လို့ mrtv4မှာကြေငြာတော့
ဖြစ်ပါဘူး။ post တင်ဖြစ်တာလဲcomment ရေးမရလို့ စမ်းပြီး copy/paste လုပ်ကြည့်တယ်။ရတယ်။နှစ်ခါလောက်စမ်းပြီးတင်တယ်။ရတာနဲ့ပြန်စာယောင်ယောင်ပို့စ်ယောင်ယောင်တင်ရတယ်။နာလည်ပေးကြပါလို့။ဒါလဲမြန်မာ့ကော်နရှင်ဘဝကိုဖတ်နေတာပဲမဟုတ်လားဗျာ။
“ဟာ” “ဟင်” “အလို’
မြန်မာသူရဲကောင်းအမျိုးသမီးကာ အပြုံးမပျက် နေရာမှမရွေ့ပဲရပ်စောင့်နေသည်။
ပထမ အပုဒ်ကို နားလည်တယ်
ဒုတိယ အပုဒ်ကို ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း လည်သွားပီ
အဲဒါ ကိုရင် ရှင်းပေတော့
လေခွုန်သံလေဗျာ ။ “ရွှီးးးးးးး”
အင်း-အမျိုးသမီး သူရဲကောင်း က ရွှီးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့။ အဲဒါ က လည်း နှလုံးရည်သာတာပဲလေ။ စေ့စပ်ညှိနိုင်းခြင်းနဲ့လဲ ပြသနာတွေအများကြီးကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ win-win ပါ။
သိုင်းဝတ္ထု ကျနေတာပဲ ။
တော်သေးတယ် ။ နာမည်တွေ မှတ်ရတာ မခက်ပေလို့။
ဘောလုံးအကြောင်းပြောတော့ ကျုပ်လည်း ဘောလုံးစကားပြောကြည့်တာပေါ့ဗျာ.
ဘောလုံးအသင်းတသင်း. ထင်သလောက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူး. အဲ့လိုအခြေအနေမှာ.
နည်းပြရီး. မင်းတုန်းမင်း ဂွေးဇိ ပဲကွ. ဆို ကလော်ဆဲမယ့်လူနဲ့.
ဟေ့. ငါတို့နည်းပြကို မထိနဲ့ကွ. ငါတို့နည်းပြက ဘယ်ပုံဘယ်နည်း. ရှာမှ ရှားတဲ့ ပါရမီရှင် ကွ ကံကောင်းလို့ရထားတာ ဆိုပြီး ဘုန်းတော်ဘွဲ့ဆက်မယ့်လူပဲ
ကျနော်တို့ တကယ်လိုတာ. (ပိတ်သတ်အနေနဲ့ပေါ့လေ). နည်းပြရီး. ဘယ်ကစားကွက် အစား ဘယ်ကစားကွက်သုံးကြည့်ပါလား
ဂလိုဆို ဘယ်ကစားသမားက ဘယ်လိုပိုအံဝင်ပြီး အသင်းကို ဘယ်လိုပိုအကျိုးပြုမယ် မဟုတ်ဘူးလား ဆိုတာမိုး ပြောမယ့် ပိတ်သတ်ဗျ.
ဒါမိုးပြောမယ့်ထောက်ပြမယ့်လူရှိတောင်. အပေါ်က. ဆဲဆြာတွေက. ဟဲ့ကောင်မင်းတတ်ရင်ဝင်နည်းပြပါလား ဆိုဆဲမယ်
ဖြဲဆြာများကလည်း ငဒို့နည်းပြကို ဝေဖန်ရအောင် မင့်ကဘာကောင်တုန်း ထလုပ်မယ်.
အကောင်းဘက်ရောက်အောင် အပြုသဘောဆွေးနွေးတာတောင်ပြောပါတယ်. အဟိ.
ဆြာခင်မောင်နိုင်လည်းပြောသွားပါတယ်. နောက်ဆုံးတော့လည်း. ဘောအကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင်.
မိသဘော မိသဘောတဲ့. အညာက ဘဲရီးတွေ စကီလေးတွေကို ညလေးတို့သဘောပါပဲကွီ ဆိုပီးပြောတဲ့သဘောမှုတ်ပါဘူး.
ဘောအကြောင်းပြောရင်. Meet the ball ပါတဲ့.
ဘုန်းတော်ဘွဲ့နဲ့ ဆဲချင်း က ဘယ်လောက် ထိရောက်မတုန်းဗျာ. ကဲ ပြောမရကြလည်း.
အင်းးးးး team တစ်ခုကိုဦးဆောင်လမ်းပြသူကအဝေဖန်ခံရမှာ။ အပြုသဘောရယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်တွေလဲရှိမှာပဲ။
By the way, ကျမ က တော်တော်လေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ တောရွာ ကလေးမှာ ကြီပြင်းခဲ့တယ်။ ကျန်းမာရေး။ပညာရေး။ အရီးပြောပြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ တကယ်ခက်ခဲတဲ့ဘဝတွေ အများကြီးပါ။ ကျမလည်း စာမသင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေမြင်ရရင်တကယ်ရင်နာရပါတယ်။ ဘယ်သူ့အပြစ်လို့ပြောရမှာလဲ။
အတွေး ကောင်း လေးပါ။
ရွှီး ဆိုလဲ ရွှီး ပေါ့။
ဒါပေသည့် ပညာတတ်မှ ရွှီးသံမြည်တာ။
အရင် သရဲဂေါင်းဂျီးဒွေက မရွှီးပဲ အမှန်အကန်ကို လုပ်သွားကြတော့ ကိုယ်တွေ တိုင်းပြည်က ဟိုး ထိပ်မှာ။